Ithente Yangaphandle Yezehlakalo Yangaphandle Ye-3x3m neGreenhouse | I-Winsom
40-99 Izikhwanyana Izingcezu eziyi-100-199 > = Izingcezu ezingama-200
I-2) Izindwangu ezisezingeni eliphakeme ezingenamanzi nezindwangu ezivikelekile ze-UV
3) Ukusetha okulula nokuphakama okuguqukayo
Inombolo Model WS-F433
Igama lento Itende Lomcimbi Wangaphandle 3x3m
Usayizi Womkhiqizo I-10x10ft (3x3m)
Umbhalo ongaphezulu I-160gsm polyester
Izinto zokubhala Ongakukhetha
Uhlaka lwe-spec. i-leg profile-25x25 / 20x20mm, i-truss tube-10x18mm, ishubhu ukushuba-0.8mm
MOQ Izingcezu ezingama-40
Ilungele imisebenzi eyahlukahlukene engaphandle, efana nemibukiso, izinhlangano, ama-BBQ, imikhosi, ukusetshenziswa kwezentengiso njalonjalo. Ingaphezulu le-10-foot x 10-foot canopy top linikeza ingqikithi yamamitha ayi-100 omthunzi kubantu abangu-8-12 - ngokwanele ukuba wonke umkhaya uthole indawo yokukhosela kanye nomthunzi!
Uhlaka lwensimbi oluqinile lwesilinganiso esiphakeme esinokuvikelwa okumhlophe okungagcineki ngogqinsi.
Ungamisa itende kalula ngokumane udonse ubakaki, okuzokusindisa isikhathi esiningi. Abanye abathengisi bangabopha kuphela intambo yokudonsela emakhoneni amane bese beyilungisa. Imikhiqizo yethu ingalungiswa ngentambo yokudonsa ohlangothini ngalunye ngaphandle kwamakhona amane, amazinga amathathu okuphakama okulungisekayo.
I-tube eyindilinga inokuqina okungcono namandla asekelayo, ngakho-ke ayonakaliswa kalula futhi igobe. Umklamo omuhle kakhulu nokwakhiwa kwe-premium kuzohlangabezana nezidingo zakho. Ukuze siqinise ekhoneni lendwangu, samukela ukungena okuphezulu kwepulasitiki okuphezulu.
Wonke amakhona aqiniswe ungqimba kabili. Imichilo ye-Velcro yokunameka ngaphezulu kufreyimu. 4 amaphuzu wezintambo. Kusetshenziswa izintambo ukulungisa i-canopy ngezigxobo zensimbi. Izintambo ezikhulayo zingalungiswa ngamazipho womhlabathi wokuqina okungeziwe.
Esedlule: I-Gazebo 3x3m yangaphandle yokugoqa
Olandelayo: I-Gazebo yangaphandle yokugoqa Nge-Sidewalls 3x6m